Homeလေလံပွဲလေလံခဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဘိန်း Fields ဘူတာနှင့်စက်လှေကားနဲ့ဓါတ်လှေကားYaptırılacaktırအတွက်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအကြား 12Peron Peron
06 / 08 / 2018 Levent Ozen လေလံခဲ, လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, TCDD, တည်ဆောက်နေလေလံ 0
စက်လှေကားထဲမှာဘိန်း Fields ဘူတာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်ဓါတ်လှေကားYaptırılacaktırကြား 1 နှင့်2Peron Peron အတွက်
STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)7တူရကီအထွေထွေဒါရိုက်တာသမ္မတနိုင်ငံ။ ဒေသန္တရရုံးဝယ်ယူမှုနှင့် Inventory CONTROL SERVICE ကိုရုံး
ဓာတ်လှေကား၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဉမင်လိုဏ်ခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကြားဘိန်း Fields ဘူတာနှင့် 12Peron Peron အဆိုအရနှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် escalators ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 389205
က) လိပ်စာ: Alicetinkaya Mah ။ Silom လမ်း CAD ။ အမှတ်2/ 1 03030 AFYONKARAHİSARဗဟို STATION ကို / AFYONKARAHİSAR
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2722137621-4411 - 2722141943
74 ကလောင်ဆောက်လုပ်ရေး, စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ခ) Place: AFYONKARAHISAR
ဂ) အစအဦးအလုပ်လုပ်: အ 30 ကာလ၌စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးသည့် နေ့မှစ.
က) Place: ပညာရေး7.BÖLG TCDD ဒါရိုက်တာနှင့်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ / AFYONKARAHİSAR
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 29.08.2018 - 10: 30
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ဓါတ်လှေကားနှင့်စက်လှေကားထဲမှာရထားလိုင်းYaptırılacaktır၏အစ္စတန်ဘူလ်အထွေထွေ 19 / 06 / 2017 ရထားလိုင်းများYaptırılacaktırဓါတ်လှေကားနှင့်ရထားလိုင်းများဓါတ်လှေကားပြီးတော့စက်လှေကား၏ဥရောပဘက်ခြမ်းရထားလမ်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲရေးအစ္စတန်ဘူလ်အထွေထွေ၏ရထားလမ်းစနစ်ဦးစီးဌာနစက်လှေကားအစ္စတန်ဘူလ် Metropolitan စည်ပင်သာယာ၏အစ္စတန်ဘူလ်အထွေထွေစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် 4734 အမှတ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် Making ။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 261036 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ရထားစနစ်ဦးစီးဌာန, ဥရောပဘေးထွက်ရထားစနစ်ညွှန်ကြားမှု, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နောက်ဆက်တွဲဝန်ဆောင်မှုအဆောက်အအုံအမ် Nezih Özmenရပ်ကွက်နိုဝင်ဘာလ SK ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ရထားဘူတာသစ်လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာရှိပြီးသားလယ်ကိုပိုYaptırılacaktırမှ 28 / 07 / 2016 Malatya ဘူတာသစ်လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းYaptırılacaktır STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏လယ်ပြင် TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပိုမိုတင်ဆက်ဖို့။ လက်ရှိလူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုယ်ရေးရာဇဝင်လူကူးဉမင်လိုဏ်ခေါင်းအဘယျဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အတွက် MALATYA GAR FIELD တစ်ဝိုက်စီမံခန့်ခွဲရေးကိုမှန်ကန်ပိုင်ဆိုင်မှုအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 281702 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜရပျကှကျ STATION ကိုလမ်းပေါ်မှ 44070 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) e-mail လိပ်စာ ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Malatya ရထားဘူတာသစ်လမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းလမ်းသွားလမ်းလာဉမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာရှိပြီးသားလယ်ကိုပိုYaptırılacaktırမှ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: မသန်စွမ်းလူတို့အဘို့လှေကားပလက်ဖောင်း (Malatya ဘူတာရုံ, Diyarbakir နှင့် Batman ဘူတာရုံ bays အကြားဘူတာ) လုပ်ပါလိမ့်မည်